Ny fahalemena dia hita tao amin'ny ankamaroan'ny mpanjifa Matrix | Avy amin'ny Linux
Ny fahalemena dia hita tao amin'ny ankamaroan'ny mpanjifan'ny Matrix
Darkcrizt | 14/09/2021 08:41 | Nohavaozina amin'ny 14/09/2021 16:42 | GNU / Linux
vao haingana nivoaka ny vaovao fa fantatra ny faharefoana (CVE-2021-40823, CVE-2021-40824) amin'ny ankamaroan'ny rindranasan'ny mpanjifa ho an'ny sehatry ny fifandraisana itsinjaram-pahefana Matrix, izay mamela ny fahazoana vaovao momba ny lakile ampiasaina handefasana hafatra ao anaty chat end-to-end (E2EE).
Mpanafika iray izay nanimba ny iray tamin'ireo mpampiasa azy avy amin'ny chat afaka mamaha ny hafatra nalefany teo aloha ho an'ity mpampiasa ity avy amin'ny rindranasan'ny mpanjifa marefo. Ny fandidiana mahomby dia mitaky fidirana amin'ny kaontin'ny mpandray hafatra ary ny fahazoana miditra dia azo alaina amin'ny alàlan'ny fivoahan'ny kaonty sy ny fanapahana ny lozisialy Matrix izay ampifandraisan'ny mpampiasa.
Voalaza fa ny faharefoana dia mampidi-doza indrindra ho an'ireo mpampiasa efitran-chat miafina izay mampifandray ireo mpizara Matrix voafehin'ny mpanafika. Ireo mpandrindra lozisialy toy izany dia afaka manandrana misandoka ho mpampiasa ny mpizara handraikitra ireo hafatra alefa amin'ny chat avy amin'ny rindranasan'ny mpanjifa marefo.
fahalementsika dia vokatry ny lesoka lojika amin'ny fampiharana ny mekanisma hanomezana fidirana indray amin'ny lakile tolo-kevitra ao amin'ireo mpanjifa samihafa voamarika. Ny fampiharana mifototra amin'ny tranomboky matrix-ios-sdk, matrix-nio, ary libolm dia tsy mora tohina.
Araka izany, ny fahalemena dia miseho amin'ny rindranasa rehetra izay nindrana ny kaody misy olana y izy ireo dia tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny Matrix sy Olm / Megolm protocols.
Manokana, ny olana dia misy fiantraikany amin'ny mpanjifa Element Matrix (Riot taloha) ho an'ny tranonkala, birao ary Android, ary koa ny rindranasa sy tranomboky mpanjifa avy amin'ny antoko fahatelo, toy ny FluffyChat, Nheko, Cinny, ary SchildiChat. Ny olana dia tsy miseho amin'ny mpanjifa ofisialy iOS, na amin'ny fampiharana Chatty, Hydrogen, mautrix, purple-matrix ary Siphon.
Ireo kinova patched an'ny mpanjifa voakasik'izany dia misy; koa angatahina mba havaozina haingana araka izay azo atao ary miala tsiny izahay noho ny fanelingelenana. Raha tsy afaka manatsara ianao, dia eritrereto ny hitazomana ireo mpanjifa marefo ivelan'ny Internet mandra-pahatonganao. Raha toa ka ivelan'ny Internet ny mpanjifa marefo dia tsy azo fitahina izy ireo amin'ny famoahana ny lakile. Mety hiverina soa aman-tsara ao anaty Internet izy ireo raha vao nohavaozina.
Mampalahelo fa sarotra na tsy azo atao ny mamantatra ny tranga misy an'io fanafihana io amin'ny alàlan'ny mpanjifa sy mpizara. Na izany aza, satria ny fanafihana dia mitaky fanelingelenana ny kaonty, ny mpitantana ny mpampiantrano an-trano dia mety maniry ny handinika ny vatan'izy ireo raha misy fambara tsy azo idirana.
Ny rafitra fifanakalozana fototra, amin'ny fampiharana izay nahitana ny fahalemena dia mamela ny mpanjifa tsy manana lakilen'ny famoahana hafatra ahafahana mangataka lakile avy amin'ny fitaovan'ny mpandefa na fitaovana hafa.
Ohatra, ity fahaiza-manao ity dia ilaina mba hiantohana ny famoahana ireo hafatra taloha amin'ny fitaovana vaovao ampiasain'ny mpampiasa na raha sendra very ny fanalahidy misy ny mpampiasa. Ny famaritana ny protokol dia manome baiko amin'ny alàlan'ny default mba tsy hamaly ny fangatahana lehibe ary halefa ho azy ireo fotsiny amin'ireo fitaovana voamarina an'ny mpampiasa iray ihany. Mampalahelo fa amin'ny fampiharana azo ampiharina dia tsy feno io takiana io ary ny fangatahana handefa lakile dia tsy voamarina araka ny tokony ho izy ny fitaovana.
Ny faharefoana dia hita nandritra ny fanaraha-maso ny fiarovana ny mpanjifa Element. Ny fanamboarana dia efa azon'ny mpanjifa sahirana rehetra. Nasaina ireo mpampiasa hametraka maika ny fanavaozana ary hampiato ny mpanjifa alohan'ny hametrahana ilay fanavaozana.
Tsy nisy porofo ny fanararaotana ny marefo alohan'ny famoahana ny hevitra. Tsy azo atao ny mamaritra ny zava-misy amin'ny fanafihana amin'ny alalàn'ny kaonty mahazatra sy ny lozisialy, saingy noho ny fanafihana mitaky fandefasana ny kaonty, ny mpandrindra dia afaka manadihady ny fisian'ireo lozisialy mampiahiahy amin'ny alàlan'ny lozisialy fanamarinana ao amin'ny mpizara azy ireo, ary ireo mpampiasa dia afaka manombatombana ny lisitry ny fitaovana mifandraika amin'ny kaontiny noho ny fifandraisana indray mandeha sy ny fanovana ny satan'ny fahatokisana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ny fahalemena dia hita tao amin'ny ankamaroan'ny mpanjifan'ny Matrix
Spook.js, teknika vaovao hitrandrahana ny fahalemen'ny Spectre ao amin'ny Chrome
Hypnotix: fampiharana streaming IPTV miaraka amin'ny fanohanan'ny fahitalavitra mivantana sy maro hafa